A ဖင်လန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ နိုင်ငံခြားသားများအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဖင်လန်ဖောင်ဒေးရှင်း 2015 ၏အက်ဥပဒေ (က "အက်ဥပဒေ") ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ရပ်စဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်အတူ 1930 ထံမှယခင်အက်ဥပဒေကိုအစားထိုး။ အဆိုပါ 1930 အက်ဥပဒေအရ, ခွင့်ပြုချက်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုဖွဲ့စည်းရန်နှင့်တဦးတည်းကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်ရန်အတွက်ဖင်လန်မူပိုင်ခွင့်နှင့်မှတ်ပုံတင်ရုံး (PRH) မှလိုအပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 2015 အက်ဥပဒေသူတွေကိုခွင့်ပြုချက်ဖျက်သိမ်း။
ဖင်လန်မြောက်ပိုင်းဥရောပတိုက်တွင်တည်ရှိပြီးနေတဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏အရာရှိတဦးကအမည် "ဖင်လန်သမ္မတနိုင်ငံ" ဖြစ်ပါတယ်။
1809 မှစ. 1917 တိုင်အောင်, ဖင်လန်ရုရှားအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖင်လန် 1995 ကတည်းကဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
တစ်ဦးကဖင်လန် Foundation မှအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်:
• 100% နိုင်ငံခြားရေး: တည်ထောင်သူ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးနိုင်ငံခြားနှင့်ဖင်လန်၏အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။
• အစာရှောင်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း: ပဋိညာဉ်စာတမ်းကိုပြင်ဆင်နေနှင့်အစိုးရနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့ရက်ကာလ၌ပြည့်စုံစေနိုင်သည်။
• ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုများကို၎င်းတို့၏အကြွေးများကဖမ်းဆီးရမိခြင်းမှတည်ထောင်သူနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
• အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်း: ရိုးအမြစ်ကိုမကြာခဏတစ်မိသားစုရဲ့အမွေခံများနှင့်အစဉ်အဆက်အဘို့မိမိတို့အမွေခံဖန်တီးနေကြသည်။
ဖင်လန်ရိုးအမြစ်ကိုအတိအကျရောနှောသို့မဟုတ်ဖင်လန်အတွက်အခြားဥပဒေရေးရာ entity ရဲ့နာမတော်လည်းအလားတူမဟုတ်သောအရာအမည်ကိုရွေးချယ်ရပါမည်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ကိုး စား. , ကုမ္ပဏီများ, ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားဖို့စကားလုံး "ဖောင်ဒေးရှင်းက" သုံးပြီးအဆုံးသတ်ရပေမည်။
အဆိုပါစကားလုံး "ဖောင်ဒေးရှင်းက" ဖင်လန်အတွက်ယေဘုယျအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအသုံးအနှုန်းမှာ "ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းက" သို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ "အမြတ်အစွန်းအတွက်မရည်ရွယ်သော Foundation မှ" ကိုဆင်တူသည်။
ရိုးအမြစ်ကိုတစ်ဦးအကျိုးရှိသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လှူဒါန်းဂုဏ်သတ္တိများစီမံခန့်ခွဲရန်ထူထောင်လျက်ရှိသည်။ ရိုးအမြစ်ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နာမတော်၌ဂုဏ်သတ္တိများပိုင်ဆိုင်ပြီးတရားစွဲမှု file ဖို့နဲ့တစ်ဦးတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုပါတီအဖြစ်အမည်ရှိခံရနိုင်ပါလိမ့်နိုင်သည့်သီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။
ရိုးအမြစ်ကိုထိုကဲ့သို့သောအနုပညာများအတွက်ရန်ပုံငွေများ, ယဉ်ကျေးမှု, သိပ္ပံနှင့် wellbeing န်ဆောင်မှုရယူအဖြစ်တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထူထောင်လျက်ရှိသည်။ သူတို့ကအစမိသားစုနှင့်၎င်း၏အမွေခံ၏သုခချမ်းသာအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ ရိုးအမြစ်ကိုပိုင်ရှင်တွေ, အဖွဲ့ဝင်များ, ဒါမှမဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။
တစ်ဦးကအခြေခံအုတ်မြစ်တိကျသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လှူဒါန်းခဲ့ဂုဏ်သတ္တိများကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ တစ်မိသားစု၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့တည်ထောင်သူအခြေခံအုတ်မြစ်ဖန်တီးများနှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်အဲဒါကိုဂုဏ်သတ္တိများလှူဒါန်း။ အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်အများအပြားစဉ်မြေးဆက်များအတွက်မိသားစုနှင့်၎င်း၏အမွေခံ၏အကြိုးအတှကျဖြစ်နိုင်သည်။ လှူဒါန်းခဲ့ဂုဏ်သတ္တိများအမည်ရှိမိသားစုဝင်များနှင့်၎င်းတို့၏အမည်မဖော်အနာဂတ်အမွေခံအကျိုးအမြတ်၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုရမည့်အခြေခံအုတ်မြစ်များအတွက် (အငှားဂုဏ်သတ္တိများလိုမျိုး) ဝင်ငွေ generate လိမ့်မည်။
ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ပဋိညာဉ်စာတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတည်ထောင်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရုံကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဆောင်းပါးများ (သို့မဟုတ်အစည်းအရုံးများဆောင်းပါးများ) ကဲ့သို့ပဋိညာဉ်စာတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခံရဖို့ဘယ်လောက်ပေးစွမ်းသည်။ ဒါက Trustees ခန့်အပ်လျော်ကြေးငွေ, ဖယ်ရှား, အစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်မိမိတို့၏အနားယူနေကြသည်ကိုဘယ်လိုဖော်ပြပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် Trustees ၏တန်ခိုးနှင့်တာဝန်များပေးအပ်လျက်ရှိသည်။
အာဆီယံပဋိညာဉ်စာချုပ်ကိုလည်းကနဦးပိုင်ဆိုင်မှု၏လှူဒါန်းမှုနှင့်မည်သို့သူတို့စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်များ၏စွန့်ပစ်ပါလိမ့်မည်ဖော်ပြသည်။ ဘယ်လိုအနာဂတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလှူဒါန်းခဲ့ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချနှင့်အတူဘုတ်အဖွဲ့အထောက်အကူပြုဖို့ခန့်အပ်ရန်လိုအပ်ပေမည်ဘယ်အရာကိုများနှင့်အတူလုပ်နိုင်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအမျိုးအစားများ။
တစ်ဦးကအခြေခံအုတ်မြစ် Foundations ၏မှတ်ပုံတင်မည်တွင်ထည့်သွင်းထားကြောင်းအပေါ်မှာအစိုးရနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ပဋိညာဉ်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးသည်နေ့မှ3လအတွင်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖင်လန်မူပိုင်ခွင့်နှင့်မှတ်ပုံတင်ရုံးကထိန်းသိမ်းထား Foundations ၏မှတ်ပုံတင်မည် (PRH) တွင်ထည့်သွင်းအစီရင်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါက PRH ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံတင်သွင်းခြင်းနှင့်အတူကုန်ပြီ။
ပုံစံဖြည့်စွက်အပြင်, ပူးတွဲသည်ပဋိညဉ်စာတမ်းတစ်ခု certified ရရှိထားပြီးမိတ္တူပါဝင်ရမည်အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့အားဖြင့်ယောက္ခမများနှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်၏ကနဦးအရင်းအနှီးပေးဆောင်ခဲ့ကွောငျးအတည်ပြုထားတဲ့စာရင်းစစ်၏အစီရင်ခံစာ။
အဆိုပါ PRH ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများစစ်ဆေးခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြင့်အမြစ်ကိုကြီးကြပ်ရသောအခွင့်အာဏာသည်။ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့လျှင်, တစ်တိုက်မြစ် PRH မှနောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများ file ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ PRH လည်း၎င်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆန်းစစ်ဖို့စာရင်းစစ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့်အမြစ် '' ရည်ရွယ်ချက်များတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ရိုးအမြစ်ကိုအစိုးရကနှင့်အတူတည်ထောင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက် 50,000 ယူရိုမြို့တော်တစ်ခုအနည်းဆုံးရှိရမည်။
အခြေခံအုတ်မြစ်အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်အမည်ရှိဂေါပကဘုတ်အဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူလိုက်နာဖြစ်ကြောင်းသေချာ။ အဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့တစ်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့အမြတ်အစွန်းထုံးစံ၌အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်တာဝန်ရှိသည်။
ပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်ကိုကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အများပြည်သူကောင်းသောမြှင့်တင် 20% တစ်ခုဝင်ငွေအခွန်နှုန်းကိုများအတွက်ထိုက်ကြသည်မဟုတ်။
အဆိုပါပဋိညဉ်စာတမ်းနှင့်အားဖြင့်ယောက္ခမအဆိုပါ PRH နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ဘို့ပူးတွဲအဖြစ်ထည့်သွင်းထားပါသည်ကတည်းကတည်ထောင်သူ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်ကနဦးနိမ့်ဆုံးမြို့တော်လှူဒါန်းမှုများ၏အမည်များအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးကတိုက်မြစ် PRH နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်တစ်ဦးအပိုဆောင်းတစ်ရက်နှင့်အတူတနေ့နေသူများကဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုမြန်ဆန်ဖွဲ့စည်းခြင်း, ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း: တစ်ဦးကဖင်လန် Foundation မှအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်။